कपिलवस्तुका अग्निपीडितको प्रश्न, के हामी नेपाली होइनौँ ? « News of Nepal
कपिलवस्तुका अग्निपीडितको प्रश्न, के हामी नेपाली होइनौँ ?
कपिलवस्तु, २१ पुस । कपिलवस्तुका अग्निपीडित भन्छन्, सरकारले हामीलाई बिर्सियो । हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा व्यवहार गरियो ।
तेह्रथुमका जनताले २० दिनमै राहत पाउने हामीले कहिले पाउने भनेर गुनासो गरेका छन् । कपिलवस्तुमा २०७२/७३ मा एक हजारभन्दा बढी घर टहरा जलेर खरानी भएको सरकारलाई पत्तोसमेत छैन भन्दै अग्निपीडितले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले के हामी नेपाली नागरिक होइनौँ भन्दै सरकारसँग राहतको माग गरेका छन् ।